တိုကျိုပွဲဦးထွက်ပေါ်ဂျပန် Display ကိုရှယ်ယာကျဆင်း - သတင်း Rule
တိုကျိုပွဲဦးထွက်ပေါ်ဂျပန် Display ကိုရှယ်ယာကျဆင်း
iPad Air ရဲ့ (ဓာတ်ပုံအကြွေး: John.Karakatsanis)
ဂျပန်ပြရန်အတွက်ရှယ်ယာများ — ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်အတွက် screen ၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်တစ်ဦး key ကို Apple ကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း — သူတို့၏အပေါ်ထိုး တိုကျို ပွဲဦးထွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, တစ်ဦးသည်အောက်ပါ $3.2 ဘီလျံအထိကနဦးအများပိုင်ရာပူဇော်သက္ကာ.
အဆိုပါစတော့ရှယ်ယာ, အရာတစျခုအဆင့်မှာ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတစ်ပဉ္စမထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ, မှာအဆုံးသတ် 763 ဂျပန်ယန်းငွေ, တစ်ဦး 15.2 ၎င်း၏ထံမှရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်စက် 900 ဂျပန်ယန်းငွေစာရင်းစျေးနှုန်း, တဦးတည်းလေ့လာသူတစ်ဦးအဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုဖော်ပြနှင့်အတူ “ဘေးအန္တရာယ်”.
ချောအဆိုပါအခြေခံစံနှုန်းဂျပန်သတင်းစာ Nikkei စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်း 0.36 ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မား.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမျှော်လင့်များ၏အနိမ့်အဆုံးမှာသူ့ရဲ့ကနဦးလူထုပူဇျောသက်ကာစျေးနှုန်းအအရည်ကြည်လင် display ကိုထုတ်လုပ်သူ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတိထားခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်အားကြီးကြောင်းအခိုင်အမာ.
ဂျပန် Display ကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ရရှိထားသူ 16 ထိုစိုက်ပျိုးမှုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းက $35 ဘီလီယံကိုစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet screen များအတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်, အမေရိကန်အခြေစိုက်သုတေသနကုမ္ပဏီ NPD Group ကအညီ.
အချိုရည်ကုမ္ပဏီကြီး Suntory ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာ-and ဖျော်ယမကာယူနစ်ကြီးပြင်းကတည်းကနှင့်၎င်း၏ IPO တိုကျိုမြို့ရှိအကြီးမားဆုံးတ $3.9 ဘီလီယံ 2013.
သို့သော်, လေ့လာသုံးသပ်သူများကအနိမ့်တန်ဖိုးနည်းနိုင်ငံများမှခက်ခဲတဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆိုင်နေရသတိပေး, တရုတ်အပါအဝင်, တောင်ကိုရီးယားနှင့်ထိုင်ဝမ်. ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်, ကုမ္ပဏီ — မှာ set up 2012 Hitachi ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမှတဆင့်, Toshiba နဲ့ Sony ရဲ့ဆုံးရှုံးမှု-အောင် LCD ကိုယူနစ် — အသေးစားနှင့်အလတ်စားဖန်သားပြင်၏ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေသည်.
ဒါပေမဲ့ Seiichi ဆူဇူကီး, Tokai တိုကျို Securities မှလေ့လာဆန်းစစ်သူဈေးကွက်, သို့ပြောသည် AFP သို့: “ဤသည်၎င်းတို့၏မိဘကကုမ္ပဏီများက offloaded ယူနစ်တက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. (ဒါဟာမ) တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ရှိသည်။”
သူကကုမ္ပဏီရှိမနေသင့်ဟုဆိုသည် “၎င်း၏စာရင်းအတင်းအဓမ္မ”, ပတ်လည်ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူတစ်ခက်ခဲတဲ့စျေးကွက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကဆင်းကိုးကားပြီး 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုယခုနှစ်အတွင်း.
– '' အလွန့်အလွန်စိတ်ပျက်စရာ’ –
ဂျပန် Display ကိုအစောပိုင်းကရောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်ခဲ့ 140 အကြားမှာသန်းအသစ်ရှယ်ယာ 900 ဂျပန်ယန်းငွေနှင့် 1,100 ဂျပန်ယန်းငွေ, ၎င်း၏အဓိကပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာရှင်များများကိုဖြုတ်ပစ်မယ်လို့စဉ် 213.9 သန်းရှယ်ယာ.
“တစ်ဦးကဘေးဥပဒ်ကို, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်,” Lorne Steinberg, မွန်ထရီရယ်အခြေစိုက် Lorne Steinberg စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဦးခေါင်းကို, Dow Jones Newswires ကိုသို့ပြောသည်.
“အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဆိုးဆိုးရွားရွား mispriced ခဲ့ကြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအခြေစိုက်စခန်း misjudged ခဲ့သည်. မြောက်အမေရိက, ကုန်သည်တွေပုံမှန် IPOs ထောကျပံ့, တစ်ခုလုံးကိုဈေးကွက်ကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာရုတ်တရက်ဆိုးရွားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်ဖွင့်လှစ်ဤအမျိုးအစားမှသာဖြစ်ပျက်နိုင်အောင်။”
ခရစ် McGuire, ချီကာဂိုအခြေစိုက်ခြံရန်ပုံငွေ Phalanx Capital ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အမှုဆောင်ချုပ်, မိမိအကုမ္ပဏီဖွင့်မှာဝယ်သမျှရှယ်ယာစွန့်ပစ်.
Apple ကဂျပန် Display ရဲ့ဝင်ငွေနီးပါးတတိယအဘို့အကောင့်, ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီလည်းထိုကဲ့သို့သောက Samsung နဲ့ Microsoft အဖြစ်အခြားထိပ်တန်း gadget ကထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီဂျပန်ကုမ္ပဏီများပိုကောင်း high-resolution display ကိုနည်းပညာယှဉ်ပြိုင်ကူညီခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, သောစမတ်ဖုန်းများအတွက်စံဖြစ်လာသည်, တက်ဘလက်များနှင့်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များ.
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကကျောထောက်နောက်ခံပြုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုကွန်ယက် Corp ကတစ်ဦးအကြောင်းကိုကျင်းပ 70 ကုမ္ပဏီ၏ရာခိုင်နှုန်းရှယ်ယာပါ, သုံးယောက်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုစီကိုအကြမ်းဖျင်းဟုဆိုကာနှင့်အတူ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာ.
သူတို့အချို့စားသုံးသူထုတ်ကုန်ယူနစ်အတွက်နိုင်ငံခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်နာကျင်ဆုံးရှုံးမှုများကစျေးနှုန်း undercutting ရင်ဆိုင်ရအဖြစ်ဂျပန်အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအများအပြားသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရုန်းကန်ခဲ့ကြ, အမြတ်အစွန်းန့်ကိုပါးလွှာရှိရာရုပ်မြင်သံကြားအပါအဝင်.
ထိုကဲ့သို့သော Sony နဲ့ Panasonic ကအဖြစ်ပြီးတာနဲ့-အားကြီးသောကုမ္ပဏီအရှုံးပေါ်၏နှစ်ကြာနာကျင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလျှက်ပြီ.
Sony ကဒီလကြောင့်ခြောက်ဦးသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာက၎င်း၏ဌာနချုပ်ခဲ့တဲ့ဂုဏ်သတင်းတိုကျိုဆိုက်မှာဂုဏ်သတ္တိများရောင်းချမယ်လို့ပြောပါတယ်, အယခင်ကကမ္ဘာရိုက်နှက်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အောက်ဆုံးလိုင်းပြုပြင်ရုန်းကန်နေရတဲ့အဖြစ်.
ဤဆောင်ပါး, တိုကျိုပွဲဦးထွက်ပေါ်ဂျပန် Display ကိုရှယ်ယာကျဆင်း, ကအေအက်ဖ်ပီကနေစုစည်းတင်ဆက်သည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
25519	0 ပန်းသီး, ချီကာဂို, iPad, ဂျပန်, ဂျပန်ပြရန်, Seiichi ဆူဇူကီး, Sony က, တိုကျို
← အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ရောဂါရှာဖွေမှုမှားယွင်းနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု ငရဲကနေ '' ကြက်’ ငှက်ကဲ့သို့ဒိုင်နိုဆောအပေါ်သစ်ကိုအလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ →